War Deg Deg ah: Al Shabaab oo Qaraxyo soo galinaya Muqdisho, NISA oo Xog heshay & Amaanka oo… | Allbanaadir News	War Deg Deg ah: Al Shabaab oo Qaraxyo soo galinaya Muqdisho, NISA oo Xog heshay & Amaanka oo…
War Deg Deg ah: Al Shabaab oo Qaraxyo soo galinaya Muqdisho, NISA oo Xog heshay & Amaanka oo…
Ciidanka Nabad sugida Dowladda Soomaaliya ayaa xiray Kontaroolka Siinka dheer oo ah halka Muqdsho lagaga soo galo dhanka Galbeed,halkaasi oo gaadiid badan oo ka yimid Gobolka Shabeellaha hoose iyo Gobollada ku teedsan ku xayiran yihiin.
Mid ka mid ah Ilaalada Ciidanka Nabad sugida ee Siinka Dheer oo si hoose ula hadalnay ayaa inoo sheegay iney cabsi ka jirto Gaari Qaraxyo ka buuxaan oo Al-Shabaab damacsan yihiin iney soo geliyaan magaalada Muqdisho.
Waxaa barta ciidan ka socda Baaritaan Xooggan oo lagu sameynayo gaadiidka iyo dadweynaha soo galaya magaalada Muqdisho.
Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa si aad ah loo adkeeyay,waxaana Ciidamo Boolis iyo Nabad sugid lagu kordhiyay baraha ciidanka ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka feejigan Qaraxyo magaalada Muqdisho ka geystaan kooxda Al-Shabaab ka dib weerarkii xarunta Otto Otto.